Basa reKubatsira Vakavhiringwa neDutumupengo Rinonzi Riri Kufamba Zvakanaka
Mumwe wevanhu vakatungamirira mukutsvaka mari yekubatsira vanhu vakavhiringwa nedutumupengo reCyclone Idai, VaFreeman Chari, vanoti vari kufara kuti mari yavari kuunganidza iri kubatsira kugadzirisa zvikoro nezvimbuzi pamwe nevana vechikoro vakavhiringwa nedutumupengo iri.
“Tiri kufara nemashoko atinotambira kubva kune vatinoshanda navo vanopinda munzvimbo idzi kuZimbabwe. Vanhu vazhinji vakaratidza chido chekubatsira vakabvisa mari yakawanda kuti zvikoro zvakapunzwa nemvura zvigadzirwe,” VaChari vaudza Studio 7.
Rimwe remasangano ari kubatsira mumatunhu eChimanimani neChipinge, rePlatform for Youth Development, rinoti zvikoro nezvimbuzi zvizhinji munzvimbo idzi, zvakagadziriswa kuti zvishandiswe panovhurwa zvikoro mwedzi unouya.
Mukuru wesangano iri, VaClaris Madhuku, vanoti sangano ravo riri kushanda zvakanaka chose nevakaunganidza mari iri kushandiswa mukugadzirisa zvinhu zvakavhiringwa nemafashamu eCyclone Idai.
“Project iyi ihomwe yemari yakaunganidzwa nevanhu kuti ibatsire. Basa redu nderekuona kuti zvikoro zvipi zvakapunzwa kana kuti ndevapi vana vakavhiringwa. Tisu tinotarisa kuti ndevapi vana vanofanirwa kupiwa rubatsiro uye kuti ndezvipi zvikoro zvinonyanya kuda kugadziriswa tobva taudza vabati vehomwe,” VaMadhuku vaudza Studio 7.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muAmerica neCanada zvakaumba homwe yekuunganidza mari yekubatsira vakawirwa nedambudziko rakakonzerwa nedutumupengo nemafashamu eCyclone Idai.
Hurukuro naVaClaris Madhuku